China farany 5inch Electric Rotary Car buffer Polishing Machine CHE-C6866 mpanamboatra sy mpamatsy | Checheng
Farany 5inch Electric Rotary Car buffer Polishing Machine CHE-C6866
Item TSY: CHE-C6866
Fampiasana: Ho an'ny antsipirian'ny fiara
Ity polisy rotary 5inch farany ity dia natao ho an'ny asa mafy indrindra. Môtô elektrika voafantina manokana miaraka amina herinaratra 1000W sy 4 mahery mamindra tsela goavambe mamela asa sarotra sy maharitra mandritra ny ora maro miaraka amin'ireo verinia mitaky be indrindra. Raha ampitahaina amin'ny poloney rotary hafa dia mahatohitra ny tsindry kokoa izy io. Ankoatr'izay, niaraka tamin'ny bearings NSK Japoney rehetra izy, fanentanana miandalana miaraka amin'ny fiasan-dàlana haingam-pandeha, fanombohana malefaka ary rafitra tsy miovaova izay mahatonga ny masinantsika ho mora kokoa, ahazoana aina, mahay mandanjalanja ary milamina rehefa ampiasaina. Ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha ampiasain'ny ankihibe dia manome fifehezana hafainganam-pandeha miovaova 700 ka hatramin'ny 2500 RPM. Izy io dia manana ny spindle M14 manara-penitra, izay mahatonga azy hifanaraka amin'ireo takelaka manohana indrindra eny an-tsena. Ny ergonomika avo lenta dia miantoka ny asa ahazoana aina, ity mpandinika rotary ity dia manome hazakazaka milamina ho an'ny asa poloney lehibe.
Tsy misy haingam-pandeha:
3.0 metatra tariby
1pc 5in lovia tohana, 1pc wrench, 1pc sisin-tànana, 1pc manual, 1pc extension bar,
Borosy karbaona 1pr
1.Equip miaraka amin'ny bearings NSK Japoney rehetra sy kodiarana 4, mahatonga azy io hovitrovitra ambany be ary mahazaka fanoherana bebe kokoa.
2.Project switch switch, ny trigger dia afaka mifehy ny fametrahana 6 hafainganam-pandeha izay mety kokoa mandritra ny fiasana.
3.Motera mahery vaika 1000watt dia manala ny fahasimbana haingana kokoa.
4. rafitra haingam-pandeha tsy tapaka miaraka amina fiandohana malemy.
5.Toritra avo, maivana ary mahay mandanjalanja.
6.Ny motera mavesatra dia manome hery lehibe.
7.Extra mavesatra adidy M14 (5/8 ") boribory misy hidin-tsabatra.
8.Fehezana fehikibo vita amin'ny fingotra ary tantanana, ahazoana aina kokoa.
9.Ny seranan-tsambo boribory karbonika dia manamora ny fanovan'ny mpampiasa ny borosy karbonina.
10.Ny borosy karbonika aorinan'ny motera dia misoroka ny fahasimban'ny motera.
11.Ny fanamboarana baolina 100% nesorina dia manome fiainana lava kokoa.
Previous: Polisim-pamokarana Rotary 1000watt vaovao ho an'ny famolavolana fiara CHE-C6800
Manaraka: 5inch Car Polisher Polishing Machine 8mm Auto Wax Buffer DF8A